China Kupisa Kutengeswa 100% Kwakachena Watermelon Muto Kugadzira Mutsetse fekitori nevagadziri |JUMP
Kutengesa Kupisa 100% Yakachena Watermelon Juice Processing Line
1 Gore waranti, hupenyu-hurefu mushure mekutengesa sevhisi
Mainjiniya anowanikwa kune esevhisi muchina mhiri kwemakungwa
mutsara wekugadzira muto wewatermelon
turnkey mhinduro, kubva kuA kusvika kuZ sevhisi
dhizaini inonzwisisika yemutengi, 100kg/H kusvika 100T/H
chiyero chemba uye chiyero chekutengeserana
SUS304 Stainless Simbi
Otomatiki Zvibereko Juicer Machine
20 Set/Sets pamwedzi
Yakagadzika pasuru yemapuranga inodzivirira muchina kubva pakurova uye kukuvara.Firimu repurasitiki reronda rinoita kuti muchina usanyorova uye usaora. Fumigation-isina package inobatsira kutsetseka kwetsika clearance.Muchina mukuru unozoiswa mumudziyo usina package.
Main System sumo:
Tangi yemvura yakasvibirira → pombi yemvura mbishi → sefa yejecha yequartz → yakabatidzwa kabhoni sefa → PH kugadzirisa mudziyo → chaiyo sefa → RO mudziyo → ultraviolet sterilizer → tangi yemvura yakachena → pombi yemvura yakachena
Deployment uye sterilization system:
Kuchenesa → kurova → enzymolysis → kusefa → magaba eshuga → pombi yekunwa → sirapu sefa → tangi yekuparadzira → pombi yechinwiwa → kusefa kaviri → sterilizer yekupisa yakanyanya kupisa → tangi yekuvharisa yakakwira → CIP yekuchenesa mudziyo → CIP yekudzosera pombi
Kuzadza uye kurongedza system:
Kuwachisa magaba → Kuzadza nekuisa chisimbiso 2 muchikamu chimwe chete → Shandura magaba → Inofambisa sisitimu → Tunnel sterilization → Mvura yakasimba → Inkjet printer → Shandura magaba → Kurongedza nemaoko
Zvinoenderana chinwiwa muchina uye midziyo:
Sterilization tangi, tangi yekusanganisa, yakananga kutonhora tangi, inopisa uye inotonhora tangi, poto yeshuga, iyo inopindira ndiro yekupisa inotsinhanisa, midziyo yekusefa, yakachinjika sterilization poto, yekupedzisira-yepamusoro tembiricha yekukurumidza sterilization muchina, midziyo yekupfumisa, CIP yekuchenesa michina, Chinwiwa pombi, sefa. midziyo, kupfavisa mvura uye kugadzira michina, beater, colloid mill, juice midziyo, homogenizer, vacuum degassing tank, multi-function extraction tank, midziyo yekuzadza, sanitary v.alves etc.
Kugadzirawatermelon muto / pulp / puree kugadzirisa mutsara wesimba uye capital intensive.Ingosununguka kusununguka kuonana008613681836263
JUMP iri kuchengeta chinzvimbo chehutungamiriri mune domatisi paste uye yakanyura apuro muto wekugadzira mutsara.Isu takaitawo budiriro yakanaka mune zvimwe zvinwiwa zvemichero & muriwo, senge:
1. Muto wekugadzira muto wemuto weorenji, muto wemazambiringa, jujube juice, coconut drink/coconut mukaka, pomegranate juice, watermelon juice, cranberry juice, peach juice, cantaloupe juice, papaya juice, sea buckthorn juice, orange juice, strawberry juice, mulberry. muto, muto wepineapple, muto wekiwi, muto wewolfberry, muto wemango, muto wegungwa buckthorn, muto wemuchero, karoti muto, muto wechibage, muto weguava, muto wecranberry, muto weblueberry, RRTJ, muto weloquat uye zvimwe zvinwiwa zvemuto dilution yekuzadza tambo.
. , cherries yemumagaba, cherry yemumagaba
3. Mutsara wekugadzira sosi wemango muto, sitirobheri muto, cranberry muto, muto wemugaba wehawthorn nezvimwe.
Isu takabata tekinoroji yehunyanzvi uye tekinoroji yebiological enzyme tekinoroji, yakashandiswa zvakabudirira mune anopfuura zana nemakumi maviri epamba nekunze ekugadzira jamu & muto mitsetse yekugadzira uye isu takabatsira mutengi kuwana zvigadzirwa zvakanaka uye zvakanaka zvehupfumi.
Yedu yakasiyana-Turnkey Solution.:
Hapana chikonzero chekunetseka kana uchiziva zvishoma nezve maitirwo echirimwa munyika yako. Isu hatingope zvekushandisa kwauri chete, asiwo tinopa sevhisi imwe chete, kubva mudhizaini yako yekuchengetera (mvura, magetsi, mutsi), kudzidziswa kwevashandi, kuisirwa muchina uye kugadzirisa, hupenyu-hurefu mushure mekutengesa-sevhisi nezvimwe.
Senhanho yekutanga uye isati yaitwa purojekiti, isu tinokupa iwe une ruzivo rwakadzama uye nehunyanzvi hwekubvunza masevhisi.Zvichienderana nekuongorora kwakadzama uye kwakadzama kwemamiriro ako chaiwo uye zvinodiwa isu tichagadzira yako yakagadziridzwa mhinduro (s).Mukunzwisisa kwedu, kubvunzana kwakanangana nevatengi kunoreva kuti matanho ese akarongwa - kubva padanho rekutanga kubata kusvika pachikamu chekupedzisira chekuita - achaitwa nenzira yakajeka uye inonzwisisika.
Maitiro ehunyanzvi ekuronga mapurojekiti chinhu chinodiwa kuti zvizadziswe zvakaomarara otomatiki mapurojekiti.Pahwaro hwebasa rega rega isu tinoverenga nguva uye zviwanikwa, uye tinotsanangura mitsetse nezvinangwa.Nekuda kwehukama hwedu hwepedyo uye kubatana newe, mumatanho ese epurojekiti, kuronga kwakanangana nedonzvo uku kunovimbisa kuzadzikiswa kwakabudirira kweprojekti yako yekudyara.
Dhizaini + Injiniya
Nyanzvi dzedu muminda ye mechatronics, control engineering, programming, uye software yekuvandudza inodyidzana muchikamu chebudiriro.Nerutsigiro rwezvishandiso zvehunyanzvi zvekuvandudza, aya mafungidziro akagadzirwa pamwe chete anozoshandurwa kuita dhizaini uye zvirongwa zvebasa.
Kugadzira + Gungano
Muchikamu chekugadzira, mainjiniya edu ane ruzivo anozoshandisa mazano edu matsva muzvirimwa zvinoshandura-kiyi.Iko kurongeka kwepedyo pakati pemaneja edu epurojekiti nezvikwata zvedu zvemagungano kunogonesa mhedzisiro uye yemhando yepamusoro yekugadzirwa.Mushure mekubudirira kupedzwa kwechikamu chekuyedza, chirimwa chinopihwa kwauri.
Kubatanidza + Kutuma
Kuti uderedze chero kukanganiswa nenzvimbo dzakabatana dzekugadzira uye maitiro kusvika padiki, uye kuvimbisa kuseta kwakatsetseka, kuisirwa kwechirimwa chako kuchaitwa nevainjiniya uye matekinoroji ebasa vakapihwa uye vachiperekedza budiriro yeprojekiti yega. uye matanho ekugadzira.Vashandi vedu vane ruzivo vanozoona kuti ese anodiwa mainterface anoshanda, uye chirimwa chako chinozoiswa mukushanda.
Key muchina tsanangura
1. Yakatsetseka bhakiti chimiro kurwisa clamping michero, yakakodzera madomasi, sitiroberi, apuro, pear, apricot, nezvimwe.
2. kumhanya kwakadzikama neruzha rwakaderera, kumhanya kunogadziriswa ne transducer.
3. anticorrosive bearings, mativi maviri chisimbiso.
Mhepo Inovhuvhuta & Washing Machine
1 Inoshandiswa kugeza madomasi matsva, sitiroberi, mango, nezvimwe.
2 Yakakosha dhizaini yekusefa uye kubhubhura kuti ive nechokwadi chekuchenesa uye kuderedza kukuvadzwa kumuchero zvakare.
3 Inokodzera akawanda marudzi emichero kana miriwo, senge matomatisi, sitiroberi, apuro, mango, nezvimwe.
Peeling, pulping & Refine Monobloc (Pulper)
1. Iyo unit inogona kusvuura, pulp uye kunatsa michero pamwe chete.
2. Iyo aperture ye strainer skrini inogona kuchinjika (shanduko) zvichienderana nezvinodiwa nemutengi.
3. Incorporated Italian tekinoroji, high quality Stainless steel material inosangana nemichero zvinhu.
1. Inoshandiswa zvakanyanya mukuchera nekubvisa mvura yemhando dzakawanda dzeacinus, pip michero, nemiriwo.
2. iyo unit inotora tekinoroji yepamberi, mutsindo mukuru uye kunyatsoshanda, yakakwirira dhigirii otomatiki, nyore kushandisa uye kuchengetedza.
3. muyero wekubvisa unogona kuwana 75-85% (zvichienderana nezvakagadzirwa)
4. mari shoma uye higkunyatsoshandah
1. Kusaita enzyme uye kudzivirira ruvara rwenamira.
2. Auto tembiricha kutonga uye kunze tembiricha zvinochinjika.
3. Multi-tubular chimiro chine chivharo chekupedzisira
4. Kana mhedzisiro ye preheat uye kudzima enzyme yakakundikana kana isina kukwana, kuyerera kwechigadzirwa kunodzokera kuchubhu zvakare otomatiki.
1. Inogadziriswa uye inodzoreka yakananga kusangana nekupisa kurapwa mayuniti.
2. Ipfupi nguva yekugara, kuvapo kwefirimu rakatetepa pamwe nehurefu hwese hwemachubhu kunoderedza kubata uye nguva yekugara.
3. Yakakosha dhizaini yemasisitimu ekugovera mvura kuti ive nechokwadi chekuvharika kwechubhu.Chikafu chinopinda pamusoro pecalandria apo muparadzi anovimbisa kuumbwa kwefirimu mukati mepamusoro pechubhu yega yega.
4. Iyo mhute inoyerera inobatana-ikozvino kune mvura uye iyo mhute inodhonza inovandudza kupisa kwekushisa.Iyo mhute uye yasara mvura inopatsanurwa mudutu separator.
5. Kubudirira kwekugadzirwa kwevanoparadzanisa.
Zvakapfuura: Nhuga Juicer Machinery Production Line
Zvinotevera: Zadzisa Automatic Coconut Milk Production Line
Nyowani Dhizaini Muto Wekugadzira Mutsetse / Muto Wemuchero ...
Chibereko Yogurt Machine Yogurt Cup Chisimbiso Machine...